कोरोनाको आशंकामा तीन बालक कान्ति अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना – Karnalikhabar
कोरोनाको आशंकामा तीन बालक कान्ति अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना
काठमाडौं । कोरोनाको आशंका तीन बालकलाई कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई आइतबार एकजना र सोमबार दुईजना गरी तीनजना बालक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले कोरोनाको आशंकामा आइतबार भर्ना भएका १४ वर्षीय बालक र आज भर्ना भएका बालकहरु क्रमश: साढे चार र चार वर्षका छन् । तीनै जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरेको बताए ।
ती बालकका अभिभावक कोरोना प्रभावित देशबाट स्वदेश फर्किएको १४ दिन नपुगेको र उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका बालकहरुमा कोरोनाको लक्षण देखिएको भन्दै उनीहरुलाई अस्पताल ल्याइएको थियो,” उनले भने, “आइतबार भर्ना भएका बालकमा निमोनियाँलगायतको समस्या देखिएको छ । ती बालकको रिपोर्ट मंगलबार आउँछ । आज भर्ना भएका बालकहरुको नमुना संकलन जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट बुधबार आउँछ ।
आइतबार आइसोलेसनमा भर्नाभएका बालकको बाबु दुबइबाट फर्किएका र सोमबार आइसोलेसनमा भर्ना भएका एक बालका काका चीनबाट र एक बालका बाबु कतारबाट फर्किएका पाइएको छ । त्यसपछि उनीहरुमा कोरोनाका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको रहेछ अस्पतालका निर्देशक डा. पौडेलले जानकारी दिए।
बालकहरुको बाबुहरुको अवस्थाबारेमा जानकारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई गरिएको छ । यसअघि कोरोनाको आशंकामा अस्पतालमा भर्ना भएका तीनजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले कोरोना भाइरसको उपचार तथा परीक्षणका लागि कान्ति अस्पताल तोकेको छैन । तर अस्पतालले आफैंले व्यवस्थापन गरेर आइसोलेसन वार्ड भने सञ्चालन गरेको छ । आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार एकजनामा कोरोना भएको पुष्टि गरिएको थियो ।
अघिल्लो - बन्द क्लिनिक खोल्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही हुने
लकडाउनसहित यी हुन् सरकारले गरेका ८ निर्णय - पछिल्लो